Ikhibhodi yomlingo yoPhononongo lwe-Pro Pro: ukusondela ngobungozi kwiMacBook. | IPhone iindaba
Ikhibhodi yomlingo yoPhononongo lwe-Pro Pro: ukusondela ngobungozi kwiMacBook.
ULuis Padilla | | iPad Pro, Ezahlukeneyo
Abo bafuna i-iPad ukuba ibe yi-MacBook babona amaphupha abo ezaliseka ngamanyathelo amatsha athathwa ngu-Apple. Ikhibhodi entsha yoMlingo, ikhibhodi ebuyiselweyo enephedi yokulandelela kunye nendlela entle kakhulu yehenjisi, Yenza umsantsa phakathi kwePad Pro kunye neMacBook iphantse ayinanto.
I-Apple ithatha amanyathelo amafutshane kwaye ihamba kancinci, ngokuthe chu ngamanye amaxesha, kodwa inendawo yayo ecace gca, kwaye iqhubela phambili ngokungathintelekiyo ukuya kuyo. Owona mzekelo ubalaseleyo woku sinayo nge-IP Pro, ethi ngo-2018 ifumane i-USB-C ukuze ikwazi ukudibanisa izinto eziqhelekileyo, ishiye isixhobo sokuKhanya esiqhubeka nokugcina kuyo yonke isixhobo se-iOS. Ngo-2019, i-iPadOS yahlulwa kwi-iOS, ukuze ii-iPads sele zinenkqubo yazo yokusebenza eneempawu ezahlukeneyo kune-iOS. Ngo-2020, imouse kunye ne-trackpad inkxaso yafika emva kokukhutshwa kwe-iOS 13.4, Kwaye iApple yathatha ithuba lokumilisela ikhibhodi entsha: Ikhibhodi yomlingo
Ikhibhodi ebuyiselwe ngasemva enezitshixo eziqhelekileyo (indlela yesikere) kunye nephedi yokudibanisa. Iphupha lakhe nabani na kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo lifezekile. Kwaye iyenzile njengoko iApple ikwazi ukwenza izinto, kuba uninzi lwezikhuselo zebhodi yezitshixo zinokwenziwa, kodwa ngu-Apple kuphela oye wacinga ngento eyenza i-iPad ukuba "idadwe" ngaphezulu kwebhodibhodi, eneendlela ezimbini zehenjisi eziza kukwenza uthandwe ukusukela kumzuzu wokuqala uyibona, kwaye xa uyizama, ikushiya uncumo ebusweni bakho. Kwaye eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba iyahambelana ne-IP Pro 2018, inkcukacha.
1 Ikhibhodi enjengeMacBook
2 I-Multi-Touch Trackpad
3 Uyilo olomeleleyo kunye nobunzima
4 Isinxibelelanisi esiSmart, senza umahluko
U-Apple wenze kanye le nto ibifanele ukuyenza: xhobisa i-iPad ngekhibhodi efanayo neMacBook yakho. Ikhibhodi "endala" eyi-Smart inezibonelelo ezininzi, ezinje ngokukhanya kwayo kunye nokubhitya, kodwa amava xa uchwetheza engangeni kwezi zibonelelo, endaweni yoko ngokuchaseneyo, nangona ugqibela ngokuqhela koluvo lokucinezela izitshixo ze "bubble". Kodwa xa ubuyela ekusebenziseni ikhibhodi yesiqhelo uyaqonda ukuba le yimvakalelo oyifunayo. Le khibhodi intsha yoMlingo ikunika imvakalelo efanayo njengokuchwetheza kwi-MacBook Pro yakho, ngenkqubo yesikere esandula ukubuyiswa ngu-Apple emva kwamava amabi eebhodi zebhabhathane.
Ikhibhodi enobungakanani obufanayo bezitshixo, kunye nokuhamba okufanayo, ngesandi esifanayo xa uchwetheza ... kwaye eyona ilungileyo, ngokukhanyiswa okufanayo njengeMacBook. Inkqubo yokukhanya kwangasemva ikwalawulwa ngokokukhanya kokukhanya okutsalwa yi-iPad, kwaye ikwabonelela ngokukhanya okufanelekileyo kwimeko nganye. Ukuba ufuna ukuyilawula, ungayenza useto lwe-iPadOS, apha akukho maqhosha azinikeleyo kulo msebenzi. Akukho qhosha lokucima ukukhanya, kodwa ayimfuneko kuba ikhibhodi iyacima xa uthatha imizuzwana embalwa ngaphandle kokuyisebenzisa, ke ukuba uza kubukela imovie ebumnyameni, ikhibhodi ayizukuphazamisa wena.
Kwaye sesinye seziphene zekhibhodi yindawo yokusebenza ephezulu, ngamaqhosha akudala ukulawula ivolumu, ukukhanya kwesikrini, njl. Kwaye iqhosha lokubaleka, oqonda kuphela ukuba liyimfuneko kangakanani xa ungenalo. Singahlala siphinda sisebenzise izitshixo kwizakhelo kwaye siqwalasele (umzekelo) isitshixo sokuziphatha ukuze siziphathe ngale ndlela. Singafunda kwakhona iindlela ezimfutshane ezinqumlayo zokwenza imisebenzi emininzi kwaye ke ugcine ixesha, kodwa khumbula ukuba uninzi alufani nakwi-macOS. Isithandwa sam cmd + Q ukuphuma kwenkqubo ngu-cmd + H. Ayizukude de ndiphazame kwi-macOS endaweni ye-iPadOS.
Isizathu sokuba le khibhodi intsha yoBugqi ibe sisixhobo sayo somkhondo. I-Apple ithathe ithuba lokubandakanywa kwale nto ukuyila ngokutsha ikhibhodi yayo, kwaye itshintshe izinto ezininzi kangangokuba kubonakala ngathi umkhondo wendlela yeyona nto incinci kuwo, xa ungoyena mahluko ucace gca. Kwaye le trackpad kungekudala iya ngasemva, kuba ayothusi. Sukuyenza impazamo, Yindlela yokulandelela ebalaseleyo yokuba uninzi lweelaptops eziphezulu ziya kuthi sele zithanda, kodwa yayisetyenziswa kwitrackpad ngoQinisekiso lokuChukumisa kwiMacBook yam le trackpad ibonakala iphelelwe lixesha kum, kuba ibha yeepads kwiApple iphezulu kakhulu, kwaye le iwela ngezantsi kancinci.
Ukusebenza kwayo kugqibelele, ukwazi ukucofa naphi na kwi-trackpad ngempendulo yangoko nangoko, kunye nokwenzeka kokwenza izijekulo ngomnye, emibini kunye neminwe emithathu. Kwakhona, iphupha kuye nabani na okhe wazama iindlela ezingathandekiyo zokulandela umkhondo ezikukhuphisana neelaptops ... ... Ngokuqinisekileyo ubukhulu bebhodi yezitshixo iya kuba yinto ethintelayo, kodwa yi-Apple, uhlala ufuna ubungakanani.
Ndinyanzelisa: kuyonwabisa ukusebenzisa i-iPad ukuhamba phakathi kwezicelo, iidesktops, khetha iiseli kwi-Excel okanye isicatshulwa kwiLizwi, ukuphuma kwenkqubo okanye ukumilisela imisebenzi emininzi. Iimpawu zomzimba zifana kakhulu nezo siqhele ukuzisebenzisa kwi-macOS, nangona kukho umahluko. Ndicinga ukuba i-iOS 14 iyakulipolisha eli candelo ngemiqondiso emitsha kunye nokwahluka kwezinto ezikhoyo, ezinje ngeyenzelwe iSlide, eyona indenza ndiqiniseke ngazo zonke izijekulo.
Uyilo olomeleleyo kunye nobunzima
Umgangatho wokwakha weKhibhodi yeMicrosoft uphezulu kakhulu. Nje ukuba ulungelelanise i-iPad kwisiciko sekhibhodi usebenzisa iimagnethi zawo omabini la macandelo, yonke into ibonakala iyinto enye. Ukuba uyinika umntu ongenalo nofifi lokuba yeyiphi i-iPad Pro okanye ikhibhodi yobuGcisa, ngekhe kube lula kubo ukuba bazi ukuba ziingceba ezimbini ngenene. Kwaye ukukhululeka ongayisusa ngayo i-iPad yakho kwaye uyibuyisele kuyo kuyamangalisa. Kwaye uthini malunga neehenjisi ezimbini ezivumela intshukumo ukuba ivule kwaye ijolise i-iPad kuwe. Kubonakala kungakholeleki ukuba into esisiseko inokukunika imvakalelo yokugqibelela okugqibeleleyo. Ukuvula i-iPad, uthambise isikrini phakathi kweedigri ezingama-90 ukuya kwezingama-130 ezivunyelweyo, ukuvala i-iPad, ezi ziintshukumo ezilungelelaniswe ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo kangangokuba kwimizuzu embalwa yokuqala oyisebenzisayo yibhodi yezobuchwephesha inikezelwe ngoku.
I-iPad Pro "iyadada" ngaphezulu kwebhodibhodi, kodwa ayenzi njalo, iyenza ngokungathi ibhloko enye enesiciko kunye nebhodi yezitshixo, ngaphandle kokuncipha. Kwaye ukuba utshintsha ukutyekela nje kwiidigri ezimbalwa, uyakufumana ibhloko enye kwakhona. Akukho zikhundla ziphawuliweyo, kuphela ubuninzi kunye nobuncinci, kwaye phakathi kwezi zimbini nasiphi na esinye isikhundla esinokwenzeka. Iseti ye-iPad Pro + yoMlingo yekhibhodi ilungele ukuthayipha kwimilenze yakho, okanye ubuncinci ngokugqibeleleyo njengayo nayiphi na ilaptop. Into engafanelekanga kukusebenzisa Ipensile ye-Apple, kuba ayivumeli i-iPad ukuba ibekwe tyaba ngaphezulu. Ewe ungayisusa ikhibhodi kwaye usebenzise i-iPad etafileni ukuthatha amanqaku okanye uzobe ngepensile yakho ye-Apple, kodwa ndinqwenela ukuba kungenjalo.
Kodwa konke oku kuza ngexabiso, kwaye le ikhibhodi inobunzima obuphezulu kune-IP Pro uqobo.Ikhibhodi yomlingo ye-12,9-intshi ye-iPad inobunzima be-710g, ngelixa i-iPad Pro yona inobunzima obungama-641g. Xa bebonke balinganisa i-1.310g, engaphezulu kancinane kuneMacBook Air 13 "inobunzima kwaye incinci kancinci kuneMacBook Pro 13" inobunzima.. Sithetha ngeelaptops ezikhanyayo, ke ayisiyongxaki le. Akufanele silibale ukuba le khibhodi yenzelwe "ukujika" i-iPad yakho ibe lilaptop. Ukuba ufuna ukuyisebenzisa ukubukela iimovie okanye imidlalo, kungcono uthenge isiciko esiqhelekileyo, sitshiphu kwaye silula.
Siphinde sihlawule ixabiso lokuqina, nangona kungekho ngaphezulu kweKhibhodi ye-Smart yangaphambili. Kodwa besicacile ukuba sifuna ikhibhodi yoomatshini, i-backlit kunye ne-trackpad, kwaye ikwayiphakheji eqinileyo. Undikhumbuza ezo zangqa zintathu ngamagama athi "ngexabiso eliphantsi, akhawuleze, wenziwe kakuhle" xa umhlobo wezakhiwo endikhumbuza ngalo lonke ixesha efumana ithuba elincinci. Kukho izinto ekufuneka ukuba u-Apple aziphucule, kodwa zikhona ezinye ezingenakwenzeka ngokwasemzimbeni kude kuqinisekiswe ngenye indlela. Okuhlala kungatshintshi ngokubhekisele kwiKhibhodi ye-Smart kukhuseleko oluncinci olunikezela nge-iPad, kuba imiphetho isasimahla ngokupheleleyo. Ewe kunjalo, ukuba sifuna ukhuseleko ngakumbi, ubukhulu buya kuba bukhulu, kuya kufuneka sijonge kwiLogitech Slim Folio Pro ukufumana umbono.
Isinxibelelanisi esiSmart, senza umahluko
Khange sithethe ngebhetri, okanye unxibelelwano, kuba akukho mfuneko yokuba sithethe ngayo nayiphi na loo nto. Ikhibhodi yobuGcisa isebenzisa iSinxibelelanisi seSmart esibekwe ngasemva kwi-Pro Pro yakho ukuze isebenze, usebenzisa ibhetri ye-iPad yakho, kunye nokudlulisa ulwazi olufanelekileyo ngendlela efanayo. Oku kuqinisekisa ukuba ukuhamba kweTrackpad kunye nokubhala kwenzeka ngaphandle kokulibaziseka okuncinci, kwaye uqhagamshelo lweBluetooth luyafumaneka kuyo nayiphi na enye into ofuna ukuyidibanisa. Unaso isinxibelelanisi se-USB-C se-Pro Pro yasimahla, kuba ikhibhodi yobuGcisa ine-USB-C onokuphinda uyitshaje kwakhona iPro Pro, ukuvumela uqhagamshelo lombhobho, idiski yangaphandle okanye ikhamera ngaxeshanye uyilayishe ngaphandle kokufuna idoko okanye okufanayo. Le USB-C yekhibhodi yobuGcisa ivumela kuphela ukutshaja kwe-Pro Pro, hayi uqhagamshelo lwaso nasiphi na esinye isixhobo.
I-Apple ibonakalisile ngekhibhodi yayo entsha yoMlingo ukuba ihlala ihlukile xa isiza kuyilo lweemveliso eziwisa umhlathi. Umgangatho ophezulu wokwakha isiciko sekhibhodi enjengebhodi yezitshixo kunye ne-trackpad engamkeli kuphela kodwa ikwafumana ibakala le-A, elisebenzisa iSinxibelelanisi seSmart ukuze likwazi ukulibala ngeBluetooth nangenye ibhetri egcwalisa kwakhona, kunye nendlela yokuvula kunye nokujija kwe-iPad oko kukushiya uthandana ukusuka kumzuzu wokuqala. Kodwa kuya kufuneka ubhatale ixabiso eliphezulu, kwaye andibhekiseli kwi-399 ye- € ukuba imodeli ye-12,9-intshi yeendleko (€ 339 yemodeli eyi-11 ”) kodwa kunye nokwanda kobunzima kunye nobukhulu bayo yonke. Kodwa ukuba usebenzisa i-Pro Pro yakho ngokungathi lilaptop, eli xabiso lihlawulwa ngomzamo kodwa nangokonwaba.
Uyilo olugqwesileyo kunye nokwakha umgangatho
Ikhibhodi ebuyisiweyo kunye ne-trackpad
Isinxibelelanisi seSmart, akukho bhetri okanye ibluetooth
Ukuhlengahlengiswa kwe-90-130 degrees
Inzima kwaye ityebile
Akukho mqolo wezitshixo zomsebenzi
Ayinakubekwa ngokuthe nkqo etafileni
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ikhibhodi yomlingo yoPhononongo lwe-Pro Pro: ukusondela ngobungozi kwiMacBook.
I-Apple inokukhulisa isilawuli sayo kwimidlalo